शक्तिशाली टोली फ्रान्स र बेल्जियमबीच भिडन्त, को पुग्ला फाइनलमा ? | Citizen Post News
शक्तिशाली टोली फ्रान्स र बेल्जियमबीच भिडन्त, को पुग्ला फाइनलमा ?
२०७५ असार २६ गते ०७:४८
काठमाडौँ । रसियामा जारी विश्वकप–२०१८ को सेमिफाइनल खेल आजबाट हुँदैछ । विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेका भाग्यमानी यूरोपका चार टोली फ्रान्स, बेल्जियम, इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबीच प्रतिष्पर्धा हुँदैछ । सेमिफाइनलमा घरेलु मैदानमा ब्राजिललाई हराई १९९८ को विजेता बनेको फ्रान्स र बेल्जियम तथा घरेलु मैदानमा तत्कालीन जर्मनीलाई हराई १९६६ को विजेता बनेको बेलायत र क्रोएसियाबीच भिडन्त हुनेछ ।
यसअघिको खेल अर्थात क्वार्टरफाइनलमा फ्रान्सले उरुग्वेलाई २–० गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो भने बेल्जियम पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई २–१ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम चार अर्थात सेमिफाइनको यात्रा तय गरेको हो । सेमिफाइलनमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको बेलायतले स्वीडेनलाई २–० तथा क्रोसियाले आयोजक रुसलाई ट्राइब्रेकरमा ४–३ गोल अन्तरले हराएको थियो ।
मंगलबार हुने खेलमा फ्रान्सले बेल्जियमको सामना गर्दैछ भने बुधबार हुने दोस्रो खेलमा बेलायतले क्रोसिया । अन्तिम चारमा यूरोपेली चार मुलुक पुगेका कारण यसपालिको विश्वकपको उपाधि पनि यूरोपमै रहने निश्चित छ । दुवै टोलीले फुटबलका महारथि राष्ट्रहरुलाई यसअघिका खेलमा हराउन सफल भएकाले खेल आफ्नो पक्षमा हुने दावी प्रस्तुत गरिरहेता पनि फाइनलमा पुग्ने भाग्यमानी राष्ट्र को हुनेछ ? त्यो जान्नका लागि भने आजको खेल अनिवार्य हेर्नु पर्नेछ । आजको खेलको निकै रोमान्चित हुने आशा गरिएको छ ।